27 N’ụbọchị ahụ, Jehova+ ga-eji oké mma agha ya siri ike, nke dịkwa ike,+ chee ihu n’ebe Levayatan,+ bụ́ agwọ na-amịgharị amịgharị,+ nọ, ee, Levayatan, bụ́ agwọ gbagọrọ agbagọ, ọ ga-egbukwa nnukwu anụ mmiri ahụ+ nke nọ n’oké osimiri.
2 Bụọrọnụ nwaanyị a abụ n’ụbọchị ahụ,+ sị: “Ubi vaịn+ nke mmanya ya na-agbọ ụfụfụ!
3 Mụ onwe m, Jehova, na-echebe ya.+ M ga na-agba ya mmiri mgbe niile.+ M ga-echebe ya ehihie na abalị+ ka onye ọ bụla ghara iche ihu n’ebe ọ nọ imegide ya.
4 Ọ dịghị ọnụma dị m n’obi.+ Ònye ga-enye m osisi ogwu+ na ahịhịa ka ha buso m agha? M ga-azọ ha ụkwụ. M ga-esukọta ha ọkụ otu mgbe.+
5 Ma ọ́ bụghị ya, ya jide aka n’ebe m e wusiri ike, ya bịa mee ka mụ na ya dị n’udo; ya bịa mee ka mụ na ya dị n’udo.”+
6 N’ọdịnihu, Jekọb ga-agbanye mgbọrọgwụ, Izrel+ ga-ama ifuru, waakwa alaka; ha ga-amịju mkpụrụ n’elu ala.+
7 À ga-eti ya ihe otú ahụ onye na-eti ya ihe si eti ya ihe? Ka à ga-egbu ya dị ka e si gbuo ndị ya e gburu egbu?+
8 Ị ga-eji iti mkpu nke na-emenye ụjọ lụso nwaanyị a ọgụ mgbe ị ga-achụpụ ya. Ọ ga-eji ifufe ya, nke na-efesi ike n’ụbọchị nke ifufe si n’ebe ọwụwa anyanwụ, chụpụ ya.+
9 Ya mere, ọ bụ otú a ka a ga-esi kpuchie njehie Jekọb,+ nke a bụkwa mkpụrụ niile ọ ga-amị mgbe o wepụrụ mmehie ya,+ mgbe o mere ka nkume niile nke ebe ịchụàjà ya dịrị ka nzụ e gwere egwe, nke mere na a gaghị ebuli ogwe osisi dị nsọ+ na ihe e ji adọba ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ.+
10 N’ihi na a ga-agbahapụ obodo e wusiri ike, a ga-agbahapụ ala ịta ahịhịa ya, gbahapụkwa ya dị ka ala ịkpa.+ Nwa ehi ga na-ata nri n’ebe ahụ, ọ ga-amakpukwa n’ebe ahụ; ọ ga-erichapụkwa alaka ya.+
11 Mgbe ntakịrị alaka ya kpọnwụrụ, ndị inyom na-abata ga-anyakapụ ha, mụnyekwa ha ọkụ.+ N’ihi na ha abụghị ndị dị nkọ n’ịghọta ihe.+ N’ihi ya, Onye kere ha agaghị emere ha ebere, Onye kpụrụ ha agaghịkwa emere ha amara.+
12 Ọ ga-erukwa n’ụbọchị ahụ na Jehova ga-akụtusị mkpụrụ dị na ya,+ malite na mmiri na-asọ asọ nke Osimiri Yufretis+ ruo na ndagwurugwu Ijipt,+ a ga-atụtụtakwa unu otu otu,+ unu ụmụ Izrel.
13 Ọ ga-erukwa n’ụbọchị ahụ na a ga-afụ opi ike,+ ndị na-ala n’iyi n’ala Asiria+ na ndị a chụsara achụsa n’ala Ijipt+ ga-abịakwa kpọọrọ Jehova isiala+ n’ugwu nsọ nke dị na Jeruselem.+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D23%26Chapter%3D27%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl